Singapore Bandung (7days6Nights)KH-4007
Day : 1 Yangon – Singapore (Lunch on flight, Dinner)
ရန်ကုန် မှ နံနက်လေယာဉ်ဖြင့်ထွက်ခွာပြီး စင်္ကာပူ သို့ ညနေတွင်ရောက်ရှိပါမည်။ နေ့လည်စာကို လေယာဉ်ပေါ်မှာ သုံးဆောင်ကြပါမယ်။ လေဆိပ်မှ ကြိုဆိုကာ City Hall area သို့ပထမ ဦးစွာ လှည့်လည်ကြည့်ရှုပါမည်။ ရောက်ရှိမယ့်နေရာတွေကတော့ Fountain of Wealth နဲ့ နာမည်ကျော်လှတဲ့ Suntec city convention centre & shopping mall, City Hall, Merlion ပန်းခြံ နဲ့မြန်မာ တို့ စုဝေးရာ Peninsula Plaza တို့ ပါ။ ညစာကို ပင်လယ်စာ ညစာနဲ့ နာမည်ကြီး စင်္ကာပူဂဏာန်း ဟင်းနဲ့ သုံးဆောင်ကြပါမယ်။
Day :2Singapore – Bandung (Breakfast, Lunch, Dinner)
စင်္ကာပူ မှတဆင့် ဘန်ဒေါင်မြို့ လေးသို့ ညနေတွင်ရောက်ရှိကာ ဟိုတယ်တွင် check in ၀င်ပြီး မြို့ လေး ၏အလှကိုမြင်ရသော တောင်ဇောင်းစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင် ညစာသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်တွင်ပြန်လည်အနားယူကြပါမည်။
Day :3Southern part of Bandung (B,L,D)
ဟိုတယ်တွင်မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် Kawah Putih Ciwideyမီးတောင်ဝ ရေကန်သို့သွားရောက်လေ့လာပါမည်။ Rancabaliတွင်ရှိ သော လက်ဖက်စိုက်ခင်းများနှင့်camping spotနဲ့ပတ်သက်၍နာမည်ကြီးသော Glamping Lake Side Situ Patenggangသို့ လေ့လာကြည့်ရှုပါမည်။ Phinisi ဟုခေါ်သော လှေပုံစံ ဆောက်ထားသော စားသောက်ဆိုင်နေ့လည်စာ သုံးဆောင်ပြီးလျှင်ဓာတ်ပုံများလည်းရိုက်ကြပါမည်။ bangdungမြို့သို့ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။သားရေနှင့်ပြုလုပ်ထားသော အသုံးအဆောက်များကို နှစ်ခြိုက်သူများအတွက်Cibaduyut Centerသို့ ဈေးဝယ်ထွက်ပါမည်။ညစာ သုံးဆောင်ပြီး လျှင် ဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်ပါမည်။
Day :4Northern park of Bandung (B, L, D)
မနက်တွင် ပထမဦးဆုံးMaribaya Lembang Lodgeသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ အလွန်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းသောပန်းခြံဖြစ်သည်။ ပြီးလျှင် lembangမြို့ရဲ့ ရေပေါ်ဈေးသို့ လေ့လာပါမည်။နေ့လည်စာကိုBoemi Mitoha Bandungတွင်သုံးဆောင်ပြီးနောက်Riau လမ်းပေါ်ရှိ Toko Tigaအဝတ်အစား စက်ရုံရုံးခွဲများသို့ ဈေးဝယ်ထွက်ပါမည်။ပြီးလျှင်loaclစားသောက်ဆိုင်တွင် ညစာ စားပြီးနောက် bandang ဟိုတယ်တွင် အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :5Bandung (B, L, D)
မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးလျှင်Kartika Sari ကိတ်ဆိုင်သို့. ဈေးဝယ်ထွက်ပီးလျှင် ရှေးအမွေအနှစ်အဆောက်အအုံများဖြစ်သော Gedung Sate,Gedung Merdeka,Musem Geologiသို့ လေ့လာပြီး ညစာသုံးဆောင်ကာဟိုတယ်တွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :6Bandung – Singapore (B, L, D)
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ဟိုတယ်မှထွက်ကာ စင်္ကာပူသို့ သွားရန်လေဆိပ်ထွက်ခွာပါမည်။ နေ့လည်ခန့်တွင် စင်္ကာပူသို့ ရောက်ရှိပြီး နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကာ Flower Dome & Cloud Forest Dome တို့အား လည်ပတ်ပြီး ဈေးဝယ်ကာ စင်္ကာပူတွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :7Singapore shopping (B, L, D)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာစားပြီး ဈေးဝယ်ထွက်ကြကာ ရန်ကုန်သို့ပြန်ကြပါမည်။
1.	International flight fares
2.	ဟိုတည်တွင် ၆ည တည်းခိုခ (၂ယောက်တစ်ခန်း)
3.	ခရီးစဉ်တွင်ရေးပြထားသော စားစရိတ် (Drink ခမပါဝင်ပါ)
4.	ခရီးစဉ်တွင်ရေးပြထားသောနေရာများသို့ ကားခများ
5.	မြန်မာမှ Tour Leader နှင့်English စကားပြောသော Tour Guide ခ
6.	ခရီးစဉ်တွင်ပါဝင်သည်ဟုရေးပြထားသောနေရာများ၏ ၀င်ကြေးများ
7.	တစ်နေ့လျှင် ရေတစ်ဗူး